Bentota Ekhaya Hlala
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLex
ULex unezimvo eziyi-69 zezinye iindawo.
Ibekwe kwibhanki esezantsi yoMlambo i-Bentota, i-resort yaseSri Lanka ye-Bentota yindawo ebalaseleyo yeholide yonke. Indlu inezindlu zokulala ezi-5 eziPheleleyo zoMoya ezineebhalkhoni zaBucala kunye negumbi lokuhlala eliqhelekileyo kunye neKhitshi yanamhlanje !!! ziimitha ezili-100 kuphela zokuhamba ukuya elwandle
Ibekwe kuphela kwiimitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni lwaseBentota kufutshane nazo zonke iihotele zeenkwenkwezi ezi-5, kukho iindlela ezininzi zokutyela ezikufutshane okanye ungasebenzisa iKitchen ekwabelwana ngayo ukuze uziphekele, igesi kunye nezitya ezibonelelweyo, Isidlo sakusasa sibandakanyiwe kwireyithi yegumbi, uninzi lokutya. iindawo zemidlalo zamanzi ezikufutshane kunye neelwandle ezinde zesanti yegolide ukuhamba iiyure kunye neeyure !!
Sibekwe kwindawo enoxolo kakhulu eBentota kwaye uya kufumana abakhenkethi abaninzi ezitratweni njengoko indlu ibekwe phakathi kohambo olufutshane ukuya kweyona ndawo ilungileyo yeBentota Beach, ijikelezwe ziiVillas ezininzi zabucala kunye neepropathi zeenkwenkwezi ezi-5. Iindawo ezininzi zokutyela kunye neecafe zimi kakuhle kumgama wokuhamba ngokufikelela ngokulula kwiiBhanki, ivenkile enkulu, iivenkile zesikhumbuzo kunye neposi.
Umbuki zindwendwe ngu- Lex
Sihlala kwindawo eyahlukileyo yepropathi enokufikelelwa ngegadi kwaye siyathanda ukunxibelelana neendwendwe